Galaxy Note7လို ကြမ္မာဆိုးမျိုး Samsung အိမ်မက်ထဲ အစပျိုးနေပြီလား?
17 Sep 2018 . 12:36 PM
Samsung ရဲ့ အသစ်စက်စက် Galaxy Note9စမတ်ဖုန်းလေးက ဈေးကွက်ထဲရောက်လာတာ မကြာသေးပါဘူး၊ သူ့ S Pen လေးမှာ Bluetooth Function ပါလာတယ်၊ 4,000 mAh ဘက်ထရီ သုံးလာတယ်၊ ဒါတွေထက် အကောင်းဆုံး Display ပိုင်ဆိုင်နေတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေ ထောက်ပြထားတဲ့အထိ အရှိန်အဟုန်နဲ့ အောင်မြင်နေတာကိုမှ ကြမ္မာဆိုးနဲ့ Samsung ရင်ဆိုင်နေရပြီ ထင်ပါတယ်။
Note9ကို အထင်ကြီးစေတဲ့အချက်တချက်က 4000 mAh ဘက်ထရီ ပါလာတာပါ၊ သူ့လိုပဲ Note7တုန်းက ဘက်ထရီ တိုးလိုက်လို့ ပေါက်ကွဲတယ်၊ မီးထလောင်တယ်။ ဒီလို ပြဿနာဆက်ဖြစ်မှာ Samsung စိုးရိမ်ရပေမယ့် CEO ကြီး DJ Koh ကိုယ်တိုင် “Note9ဘက်ထရီနဲ့ ပတ်သက်လို့ လုံးဝ စိတ်ချထားလို့ရပါတယ်လို့” မိတ်ဆက်ပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Future Proof ဖြစ်ရဲ့လား ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဖုန်း Overheat ဖြစ်လို့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ မီးထလောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်က သက်သေပြနေလို့ Note7အိမ်မက်ဆိုးတွေ Samsung ဆီမှာ ရှင်သန်နေတုန်းပဲလား?
ဖြစ်စဉ်ကို အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် Diane Chung ဆိုသူက “စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က ကျမ Galaxy Note9စကိုင်တယ်၊ အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ အလုပ်ကိစ္စတွက် ဖုန်းပြောတယ်၊ ဖုန်းသုံးတယ်၊ အဲ့မှာပဲ ရုတ်တရက် ဖုန်းပူလာလို့ ဖုန်းသုံးနေတာ ရပ်လိုက်တယ်၊ ဓာတ်လှေကား ထဲရောက်နေတာဆိုတော့ လက်ထဲကိုင်မထားနိုင်၊ ထားစရာနေရာလည်း မရှိဆိုတော့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ထည့်ထားမိလိုက်တယ်။ အဲ့မှာပဲ အိတ်ထဲက လေချွန်သံလိုလို အသံကြားလို့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို လှည့်အကြည့် မီးခိုးတွေ ထွက်လာလို့ ချက်ချင်းပဲ ဓာတ်လှေကားထဲက အမြန်ထွက်လိုက်တယ်၊ အိတ်ထဲ မီးစွဲနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကြမ်းပြင်ပေါ် သွန်ချပြီးငြိမ်းဖို့ကြိုးစားပေမယ့် ဖုန်းက မီးဆက်လောင်နေတုန်းပဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ အနီးက လူတွေ မြန်မြန်ပဲ Note9ကို အဝတ်ထူထူနဲ့အုပ်၊ နောက်ဆုံး ရေဗုံးထဲပစ်ချလိုက်မှပဲ မီးငြိမ်းတာရပ်သွားတယ်လို့” New York မြို့ရဲ့ Queens Supreme Court တရားရုံးမှာ သက်သေထွက်ဆိုထားပါတယ်။
အခုလို ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Galaxy Note9မီးလောင်မှုကို 4000 mAh ဘက်ထရီကြောင့်လို့ ပြစ်တင်ဝေဖန် နေကြပါတယ်။ Samsung အနေနဲ့လည်း အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းရမယ့် ဖြစ်ရပ်မျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရလို့ တရားရုံးအနေနဲ့ “Samsung Battery တွေ သေချာဆန်းစစ်သွားဖို့ လိုတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်တုန်းကလည်း ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ထားဖို့လို့ Galaxy Note7ထုတ်လုပ်မှု ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတယ်၊ အဲ့တုန်းကတော့ ၁၂ လုံးလောက် ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်၊ မီးလောင်ခဲ့တယ်။ ဒါကို ဆန်းစစ်လိုက်တော့ ဘက်ထရီကြောင့် ဖြစ်နေတယ်၊ သူ့ကို သေသေချာချာ မထုပ်ပိုးထားဘူး၊ Original Battery လို့သာ ပြောတယ်၊ ခြစ်ရာဗလပွနဲ့၊ နောက်ပြီး ပြန်အစားထိုးပေးတဲ့ ဘက်ထရီမှာတောင် Insulation Tape ပါမလာဘူး” စတဲ့ အချက်တွေနဲ့ Galaxy Note7ပေါက်ကွဲရခြင်းကို ပြန်ထောက်ပြထားပါတယ်။
8 Steps Battery Testing
“ဒီအတွက် Samsung ကလည်း ဘက်ထရီပြဿနာ ထပ်မဖြစ်ဖို့ အဆင့် ၈ ဆင့်နဲ့ ပိုက်စိပ်တိုက် စစ်ဆေးပြီးထုတ်လုပ်တယ်၊ တခြား Manufacturer တွေထက်စာရင် Samsung Battery ထုတ်လုပ်မှု ပိုအဆင့်မြင့်တယ်၊ ပိုသေချာတယ်လို့” CEO ပြောကြားထားပါတယ်။
နောက်ပြီး လျှင်မြန်တဲ့ Customer Care ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ Samsung Fans တွေ နှိမ်သိမ့်ထားပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုထဲ သန်းနဲ့ချီရှိနေတဲ့ Galaxy User တွေ စိတ်မပျက်ရစေဖို့ Galaxy Note9မီးလောင်မှုကိစ္စကို အသေးစိတ် စစ်ဆေးသွားမယ်၊ နောက်တစ်ချက်က အခုလို မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်မျိုး ထပ်မကြားရသေးသလို စိတ်ပူစရာ မရှိဘူးလို့လည်း Samsung ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Galaxy Note7လို ကွမ်မာဆိုးမြိုး Samsung အိမျမကျထဲ အစပြိုးနပွေီလား?
Samsung ရဲ့ အသဈစကျစကျ Galaxy Note9စမတျဖုနျးလေးက ဈေးကှကျထဲရောကျလာတာ မကွာသေးပါဘူး၊ သူ့ S Pen လေးမှာ Bluetooth Function ပါလာတယျ၊ 4,000 mAh ဘကျထရီ သုံးလာတယျ၊ ဒါတှထေကျ အကောငျးဆုံး Display ပိုငျဆိုငျနတေယျလို့ ကြှမျးကငျြသူတှေ ထောကျပွထားတဲ့အထိ အရှိနျအဟုနျနဲ့ အောငျမွငျနတောကိုမှ ကွမ်မာဆိုးနဲ့ Samsung ရငျဆိုငျနရေပွီ ထငျပါတယျ။
Note9ကို အထငျကွီးစတေဲ့အခကျြတခကျြက 4000 mAh ဘကျထရီ ပါလာတာပါ၊ သူ့လိုပဲ Note7တုနျးက ဘကျထရီ တိုးလိုကျလို့ ပေါကျကှဲတယျ၊ မီးထလောငျတယျ။ ဒီလို ပွဿနာဆကျဖွဈမှာ Samsung စိုးရိမျရပမေယျ့ CEO ကွီး DJ Koh ကိုယျတိုငျ “Note9ဘကျထရီနဲ့ ပတျသကျလို့ လုံးဝ စိတျခထြားလို့ရပါတယျလို့” မိတျဆကျပှဲမှာ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး Future Proof ဖွဈရဲ့လား ဆိုတဲ့မေးခှနျးကို ဖုနျး Overheat ဖွဈလို့ ပိုကျဆံအိတျထဲ ထညျ့လိုကျရုံနဲ့ မီးထလောငျသှားတယျဆိုတဲ့ ဖွဈရပျက သကျသပွေနလေို့ Note7အိမျမကျဆိုးတှေ Samsung ဆီမှာ ရှငျသနျနတေုနျးပဲလား?
ဖွဈစဉျကို အိမျခွံမွအေကြိုးဆောငျ Diane Chung ဆိုသူက “စကျတငျဘာလ ၃ ရကျနကေ့ ကမြ Galaxy Note9စကိုငျတယျ၊ အဲ့ဒီနမှေ့ာပဲ အလုပျကိစ်စတှကျ ဖုနျးပွောတယျ၊ ဖုနျးသုံးတယျ၊ အဲ့မှာပဲ ရုတျတရကျ ဖုနျးပူလာလို့ ဖုနျးသုံးနတော ရပျလိုကျတယျ၊ ဓာတျလှကေား ထဲရောကျနတောဆိုတော့ လကျထဲကိုငျမထားနိုငျ၊ ထားစရာနရောလညျး မရှိဆိုတော့ ပိုကျဆံအိတျထဲ ထညျ့ထားမိလိုကျတယျ။ အဲ့မှာပဲ အိတျထဲက လခြှေနျသံလိုလို အသံကွားလို့ ပိုကျဆံအိတျကို လှညျ့အကွညျ့ မီးခိုးတှေ ထှကျလာလို့ ခကျြခငျြးပဲ ဓာတျလှကေားထဲက အမွနျထှကျလိုကျတယျ၊ အိတျထဲ မီးစှဲနတေဲ့ ပစ်စညျးတှေ ကွမျးပွငျပျေါ သှနျခပြွီးငွိမျးဖို့ကွိုးစားပမေယျ့ ဖုနျးက မီးဆကျလောငျနတေုနျးပဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ အနီးက လူတှေ မွနျမွနျပဲ Note9ကို အဝတျထူထူနဲ့အုပျ၊ နောကျဆုံး ရဗေုံးထဲပဈခလြိုကျမှပဲ မီးငွိမျးတာရပျသှားတယျလို့” New York မွို့ရဲ့ Queens Supreme Court တရားရုံးမှာ သကျသထှေကျဆိုထားပါတယျ။
အခုလို ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ Galaxy Note9မီးလောငျမှုကို 4000 mAh ဘကျထရီကွောငျ့လို့ ပွဈတငျဝဖေနျ နကွေပါတယျ။ Samsung အနနေဲ့လညျး အရှကျတကှဲ အကြိုးနညျးရမယျ့ ဖွဈရပျမြိုးနဲ့ ရငျဆိုငျနရေလို့ တရားရုံးအနနေဲ့ “Samsung Battery တှေ သခြောဆနျးစဈသှားဖို့ လိုတယျ၊ လှနျခဲ့တဲ့ ၂ နှဈတုနျးကလညျး ဒီလိုမြိုး ဖွဈထားဖို့လို့ Galaxy Note7ထုတျလုပျမှု ရပျဆိုငျးခဲ့ရတယျ၊ အဲ့တုနျးကတော့ ၁၂ လုံးလောကျ ပေါကျကှဲခဲ့တယျ၊ မီးလောငျခဲ့တယျ။ ဒါကို ဆနျးစဈလိုကျတော့ ဘကျထရီကွောငျ့ ဖွဈနတေယျ၊ သူ့ကို သသေခြောခြာ မထုပျပိုးထားဘူး၊ Original Battery လို့သာ ပွောတယျ၊ ခွဈရာဗလပှနဲ့၊ နောကျပွီး ပွနျအစားထိုးပေးတဲ့ ဘကျထရီမှာတောငျ Insulation Tape ပါမလာဘူး” စတဲ့ အခကျြတှနေဲ့ Galaxy Note7ပေါကျကှဲရခွငျးကို ပွနျထောကျပွထားပါတယျ။
“ဒီအတှကျ Samsung ကလညျး ဘကျထရီပွဿနာ ထပျမဖွဈဖို့ အဆငျ့ ၈ ဆငျ့နဲ့ ပိုကျစိပျတိုကျ စဈဆေးပွီးထုတျလုပျတယျ၊ တခွား Manufacturer တှထေကျစာရငျ Samsung Battery ထုတျလုပျမှု ပိုအဆငျ့မွငျ့တယျ၊ ပိုသခြောတယျလို့” CEO ပွောကွားထားပါတယျ။
နောကျပွီး လြှငျမွနျတဲ့ Customer Care ဝနျဆောငျမှုနဲ့ Samsung Fans တှေ နှိမျသိမျ့ထားပွီး အမရေိကနျ ပွညျထောငျစုထဲ သနျးနဲ့ခြီရှိနတေဲ့ Galaxy User တှေ စိတျမပကျြရစဖေို့ Galaxy Note9မီးလောငျမှုကိစ်စကို အသေးစိတျ စဈဆေးသှားမယျ၊ နောကျတဈခကျြက အခုလို မီးလောငျမှုဖွဈစဉျမြိုး ထပျမကွားရသေးသလို စိတျပူစရာ မရှိဘူးလို့လညျး Samsung ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
by Zawyè . 20 mins ago